Itoobiya oo qabsatey watiga ay go’aan ka gaarayso ku biirista dagaalka Al-Shabaab – SBC
Itoobiya oo qabsatey watiga ay go’aan ka gaarayso ku biirista dagaalka Al-Shabaab
Posted by editor on Noofember 21, 2011 Comments
Xukuumada Itoobiya ayaa ka shanqarisey in maalinimada Jimcaha ay go’aan ka gaari doonto inay si buuxda uga qayb qaadanayso dagaalka ka dhan xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyadoo hadalkan ku soo aadayo xili boqolaal ciidamo Itoobiyaan ah gudaha u soo galeen gobolada dhexe ee Soomaaliya, kuwa kalena ku soo wajahanyihiin gobolada Koonfur Galbeed.
Afhayeenka wasaarada arimaha dibada Itoobiya Dina Mufti oo u waramayey wakaalada wararka ee Reuters ayaa gees marey wararka ku aadan in ciidamo Itoobiyaan ah ay galeen gobolo ka mid ah Soomaaliya, waxaase uu sheegay in maalinimada jimcaha ee soo socota ay ka soo saari doonaan mowqif ku aadan in ay ku biiraan hawlgalka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab.
“Madaxda wadamada Afrikada bari waxay kulmi doonaan maalinimada Jimcaha, waxay ka wada hadli doonaan sidii loogu soo dabaali lahaa amaan dalka Soomaaliya, mid ka mid ah arimaha ay ka hadli doonaan ayaa ah in ay balaariyaan tirada ciidamada AMISOM ee ka imaanaya wadamada dariska & kuwa kale ee Afrika” ayuu yiri Dina Mufti.
Mar la waydiiyey in ay xukuumada Addis Ababa aqbali doonto codsiga ku aadan in ciidamo ay u soo dirto Soomaaliya, wuxuu sheegay in Itoobiya taageerayso hawlgalka Kenya ee ka dhan Al-Shabaab, wuxuuna muujiyey inay macquul tahay ku biirista hawlgalkaasi.
In kastoo Itoobiya aanay si buuxda u qiran in ay ciidamo galisey gudaha Soomaaliya hadana dad marqaati ah ayaa cadeeyey in deegaano ka tirsan gobolada Galguduud & Hiiraan ay 48-kii saac ee la soo dhaafay soo buuxiyeen ciidamo Itoobiyaan ah oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka.
Warar kale ayaa sheegaya in cutubyo ciidamo Itoobiyaan ay ku soo fool leeyihiin gobolada Baay & Bakool, kuwaasi oo la aaminsan yahay in yoolkoodu yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaasi oo ay ku xoogan yihiin xoogaga daacada u ah xarakada Al-Shabaab.